Minnesota Operation Lifesaver, Inc. : Meeraysi Dhul (Trespassing) In English
Jidadka tareenada waa hanti gaar ah. Meelaha u dhow wadada waxaa sidoo kale iska leh isla tareenadaas. Waxaa loo yaqaan "mudnaanta koowaad ee wadada" (right-of-way). Dadka aan u haysan ogolaansho in ay joogaan dhulka iyo dhismeyaasha jidadka tareenka waa meerestayaal (Trespassing). Hantida jidadka tareenada waxaa laga yaabaa in lagu dhajiyo calaamado kala duwan ee leh "Ha ku Meeraysan" (No Trespassing). Calaamaha oo dhan micnahoodu waa 'ka joog meeshaan" iyo "ha soo gudbin." Xataa haddii ayan wadan wax calaamad ah, waa sharci darro waana khatar in la galo dhul gaar ah. Maxaa ka mid ah khaladaadka dadku ay galaan marka ay galaan si sharci darro ah dhul u gaar ah jidadka tareenada?
Waxa ay ku mashquulaan waxa ay samaynayaan sida - socod, kaluumaysi biriijka hoostiisa iwm - mana siiyaan taxaddar gaar ah wadada tareenka.
Waxa ay aad ugu dhawaadaan jidka, ayaga oo moog in uu tareenku ka ballaaran yahay wadada ilaa lix fiit. Waxa kale oo ay moog yihiin ayaa laga yaabaa in silsiladdo, xargo iyo qalab kale ay ka furmi karaan tareenka kuna dhici karaan ayaga.
Waxay filaan tareenku in uu ka qaylo dheer-yihiin inta dhabta ah. Ama waxa dhagaha ugu jira qalabka dhagaysiga ama waxa ay fuushan yihiin baabuurta barafka ama ATV-yo (baabuur meel kasta marta) qariya qaylada tareenka.
Waxa ay la noqotaa in tareenku ka fogyahay ama ka gaabiyo sida dhabta ah.
Waxa ay la noqotaa in uu tareenku ka joogsan karo. Laakiin wakhtiga uu injineerka (tarenku arko) waxba kama gaaro in uu istaago.
Dadka boondooyinka jidadka tareenka ama tunelada waxa ay la noqotaa in ay tareenka iyo ayaga haystaan in ku filan marka uu gudbayo. Laakiin meeshu tareenka kaliya ayay ku filan tahay. Tareenku waxa uu ka ballaaranyaha wadada seddex fiit dhan walba. Marar waxa ay wadaan culays aad u badan. Waxaa intaa dheer silsilado, xargo iyo qalab kale ee ka raarici kara tareenka.
Dadka qaarkood waxa ay jecel yihiin in ay dhigaan jidka tareenka waxyaabo si ay u arkaan bal waxa dhacaya marka uu tareenku maro. Waxa ayna ka fakarin khatarta ay keeni karaan -sharci darrada ka sokow, waxa ay keeni kartaa geeri dadka meelahaas ku dhow taagan iyo dadka saran tareenka:
Dadka qaarkood tareenkii ayaa ku dhacay ayaga oo walxo dhigaya wadada-wadada kama aysan bixin ama waxaa ku dhacay tareen waddo kale ka yimid.
Wax yar-yar sida lacagta badanaa waa uu kala bixiyaa tareenku laakiin marar badan waxa si xoog badan oo geeri keeni kara u soo tuura lugaha tareenka. Waxa ay ku dhici kartaa qofkii dhigay ama dad kale ee meesha taagan. Walxaha waaweyn waxa ay gadin-karaan tareenka, taas oo keeni karta dhawac iyo dhimasho
Walxaha lagu tuuro tareenku khatar taas oo kale ah ayay keeni kartaa. Wixii lagu tuuray dib ayay usoo noqon karaan ayaga oo ku socda xoog geeri keeni kara. Dadka ku tuura tareenka walxaha waxay galinayaan naftooda halis- waxa ay mashquul ku yihiin waxa ay samaynayaan, ayaga oo moog hareerahooda. Waxaa kale ay khatar dhaawac ama xataa geeri keeni karta galinayaan rakaabka tareenka.
Khatar badan ayay keeni kartaa gaariyada tareenka oo korkoda ama hoostooda lagu ciyaaro. Way ruxmaan gaariyadaas marka ay dhaqaaqayaan waxayna u luxmaan si kadis ah. Markasta isticmaal meelaha loogu tala galay dadka lugta ah marka aad goynaysid jidka. Laga soo Xigtay: Ololaha Naf-badbaadinta
Xaqiiqada iyo Tirokoobka (Mareykanka iyo Minnesota)
Contact Minnesota Operation Lifesaver, Inc.
651-328-3259; mnoperationlifesaver@yahoo.com P.O. Box 22254, Minneapolis, MN 55422
Look, Listen, ... & Live!